Xog: Taliyihii ilaalada BF oo xilkiisa ku waayey arrin dad badan ka carooden - iftineducation.com
Xog: Taliyihii ilaalada BF oo xilkiisa ku waayey arrin dad badan ka carooden
aadan21 / November 26, 2014
iftineducation.com – War goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in xil ka qaadis lagu sameeyay Gaashaanle Sare Xasan Jaamac Guuleed ”Aboor” oo ahaa Taliyahii ciidanka Ilaalada xarunta Baarlamaanka.
Warqad kasoo baxday Xafiiska Taliyaha ciidamada Booliiska Soomaaliyeed Jeneraal Cusmaan Cumar Wehliye Gas Gas, ayaa waxaa xilka looga qaaday Gaashaanle Sare Xasan Jaamac Guuleed, kadib markii uu awoodi waayay Xaqiijinta Ammaanka Xarunta Golaha shacabka oo muddo Seddex mar uu fashil iyo buuq ku soo dhamaaday kulankii xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Xilkaani cusub ayaa loo dhiibay Gaashaanle Qaasim Xasan Fiidoow oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Booliiska Soomaaliyeed.
Dhanka kale, Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in Amarka xilka looga qaaday Gaashaanle Sare Xasan Jaamac Guuleed uu ahaa mid kasoo baxay Xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Somalia Xassan Sheekh Maxamuud oo isagu aan u hirgalin Mooshinkiisa.
Xassan Sheekh, ayaa rabay in Gaashaanle Sare Xasan Jaamac Guuleed uu xakameeyo Xildhibaanada Xarunta Baarlamaanka Foodada ka kiciyay, hayeeshee waxa uu isna laaday Xilka Gaashaanle Sare Xasan Jaamac Guuleed.
Uhuru:qof kasta lama ilaalin karo
Dowladda Maraykanka oo Muwaadiniinteeda uga digtay in ay u safraan dalka Jabuuti iyo soomaaliya